Home Wararka DFS iyo Midowga Afrika oo soo gabagabeeyay ka doodistii howlgalka cusub ee...
DFS iyo Midowga Afrika oo soo gabagabeeyay ka doodistii howlgalka cusub ee ATMIS
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa soo gabagabeeyey shirkoodii ay kaga wadahadlayeen waajibaadka shaqo ee loo igmaday, qaabka uu u shaqaynayo hawlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Labada dhinac ee Kooxaha farsamada ayaa waxay isku raaceen inay qoraalkooda u gudbiyaan dawladda Soomaaliya iyo madaxda midowga Afrika.
Waxaana La isku raacay in loo badalo magaca qorshaha cusub ee lagu hawlgalaayo ATMIS (AU Transitional Mission to Somalia) halka uu horey u ahaa AMISOM.
Shirkan wuxuu gunaanad u ahaay shirar badan oo horay uga dhacay Muqdisho, Addis Ababa iyo Cairo.
Previous articleBoobka doorashada lix kursi oo maanta marakle ka dhaceeyso Baraawe
Next articleShil khasaare dhimasho & dhaawac sababay oo ka dhacay duleedka magaalada Garoowe
Wasiir Maareeye oo afka furtay ka dib Hoobiyayaashii Xafiiskiisa ku dhacay!!